I-china 606 / 400L-nylon material low consistency cleaner ephepheni elenza isitshalo sefektri nabaphakeli | YUNFENG
606 / 400L-inayiloni impahla ongaguquguquki ongaguquguquki ohlanzekile ekwenzeni isitshalo
Uhlelo lokusebenza lokuhlanza ukuminyana okuphansi Lolu hlelo lwabatshali zimali abakhetha kakhulu amakhadibhodi umshini wephepha, umshini wokuhlanza amakhadibhodi wuhlobo lwezinto ezisetshenziswayo ukususa ama-granules amancanyana, amagwebu, ipulasitiki njalonjalo enqubeni yokukhiqiza uginindela wephepha. Isetshenziswa kabanzi ekwenzeni kabusha uginindela nokwenza umugqa wokukhiqiza iqanda. Uhlobo olusha oluhlanzayo olusebenzayo I-YF Heavy Impurity Cleaner isetshenziselwa ukususa ukungcola okusindayo njengamatshe, insimbi yensimbi, uthuli nezinhlayiya ezinkulu zikay ...
Isisebenzi sokuhlanza esindayo
I-YF Heavy Impurity Cleaner isetshenziselwa ukususa ukungcola okusindayo okufana negravel, insimbi eyisicefe, uthuli nezinhlayiya ezinkulu zikayinki ezivela enhlotsheni ehlukile yempuphu. Ukungaguquguquki kokugijima okuphezulu kakhulu kungafinyelela ku-2%, kunciphise ukulahleka kwe-fiber, kuthuthukise umthamo wokukhiqiza, kunciphise izingxenye ezidingekayo kanye nezinombolo zokuhlanza.Ukusebenza kahle kokuhlanza, okugwema ukunqwabelana kokuqukethwe komlotha ezingxenyeni zokugcina.Ukuthembeka okuphezulu kokusebenza, bekungeke kuvinjelwe.
Thayipha YF400 / 600
Ukudlula umthamo wemishini eyodwa (l / min) 400-480
Izinga lokushisa eliphakeme (ºC) 70
Max yokusebenza ingcindezi (MPA) 0.4
Ukungaguquguquki kokungena (%) ≤2%
Ukugeza ukugeleza kwamanzi 20-60l / iminithi
I-YF600 uchungechunge olusebenzayo oluphakeme kakhulu lwe-slag ye-slag ingasetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo ze-pulp ekuhlanzweni kwezinsalela nasekuhlukaniseni, kuyizinhlobonhlobo zemishini yokugaya efanayo nokuguqulwa kobuchwepheshe kokukhetha kokuqala kwemishini yokususa i-slag.
Umgomo nokwakheka kwe-YF600 yohlobo lokususa i-slag
1. Split isakhiwo
Yokuhlanza isakhiwo esihlukanisiwe, yonke i-Cleaner ingahlukaniswa ngezigaba eziyi-3-4, okulula ukuyiqaqa bese kuyashintsha.
2, izindlela ezahlukahlukene zokukhishwa kwe-slag
Ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi ukukhetha izindlela ezahlukahlukene zokukhishwa kwe-slag, ukuzivumelanisa nendawo yokusebenza yomsebenzisi.
I-3, umlomo wokukhishwa kwe-slag omelana nobumba
4. Ipayipi ngalinye le-slurry lixhunywe ne-hose yegatsha le-slagger, futhi ifakwe i-valve ukwenza lula ukusetshenziswa kohlelo lonke ku-slagger eyodwa.
5. Azikho izingxenye ezihambayo, ukusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa.
Izici ezihlukile zesakhiwo zenza i-slag cleaner esindayo ibe nezici ezilandelayo:
1, ingasusa ngempumelelo isilayidi esihlabathini, amatshe, i-iron wire nokunye ukungcola okusindayo;
2, ukwandisa inani nokuqhubeka kwamandla we-slag, kunciphise ukulahleka kwe-fiber;
Ngesikhathi sokusebenza, ingaveza imodeli yoketshezi ezinzile, engasusa ukungcola ngempumelelo nangokuqhubekayo.
4. Umphumela wokusindisa obalulekile.
Langaphambilini Ukugqoka kwekhwalithi enhle nokumelana nokugqwala kwama-95 alumina ceramic ring liner
Olandelayo: i-centri-cleaner Susa i-slag ngaphambi kokugaya nokusetshenziswa kwe-sieving kwepermermill
ukuhlanzeka okungaguquguquki okuphansi
Inayiloni Paper Acashile